Duraka Kura दुराका कुरा: November 2013
पहिचानको राजनीतिक व्यवस्थापन
‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७०’ को परिणामले नेपालको राजनीतिक एवम् सामाजिक परिदृश्यमा एउटा मननयोग्य सन्देश बोकेर आएको छ । संघीयता, जातीय परिचान तथा धर्मनिरपेक्षताका मामिलाहरूलाई जोडतोडका साथ उठाउने नेकपा एमाओवादीले गहिरो पराजय भोग्नु र यी मामिलामा तुलनात्मक रूपमा अनुदार ठानिएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले ठूलो आकार ग्रहण गर्नुले नेपालको राजनीतिक एवम् सामाजिक परिदृश्यमा विशेष अर्थ राखेको देखिन्छ ।
संघीयता र जातीय परिचानका मामिलाहरूबारे पार्टीभित्र सङ्घर्ष चर्काएर नेकपा एमालेबाट बाहिएका अशोक राईको संघीय समाजवादी दल र पार्टीभित्र अन्तरिक सङ्घर्ष गरेर पनि एमालेभित्रै रहेर चुनावमा होम्मिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता नेताहरूले पराजय भोग्नु र हिन्दू राज्य एवम् राजतन्त्रको नारा दिने दक्षिणपन्थी शक्तिले पूर्वी क्षितिजमा उदाउने तरखर गर्नुलाई मूलतः जातीय परिचान तथा धर्मनिरपेक्षताका अजेण्डाहरूको अवसानको रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए जातीय परिचान तथा धर्मनिरपेक्षताका अजेण्डाहरू साँच्ची नै नामेट नै भएका ह्न् त ? चुनावी परिणाममा स्वाभाविक रूपमा जनमत प्रतिविम्बत भए पनि विजयीबाहेकका दलका पक्षमा खसेका मत पनि जनमत नै हो भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै मननयोग्य पक्ष हो । विजयीइतर दलका पक्षमा खसेको मतले पनि समाज निर्माणमा अर्थ राख्न भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थान दिइन्छ । यो नै लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष हो ।
चुनावी परिणाममार्फत दृष्टिगोचर भएको यो नवीनतम् परिदृश्य नेपाली समाजमा विकसित उहापोहपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमहरूको पछिल्लो स्वरूप हो, जसले बहुलवादी नेपाली समाजको उर्लँदो वैचारिक ज्वारभाटाको प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा विद्यमान विरोधाषपूर्ण विचारहरूको लुकमारी खेल हो । नेपालको राजनीतिक रङगमञ्चमा देखापरेको लुकमारीको यो खेल यत्तिकैमा टुङ्गिने छाँट देखिँदैन ।
यो लुकमारी खेल तबसम्म चलिरहने देखिन्छ, जबसम्म वैचारिक संघर्षमार्फत व्यक्त भएका नेपाली समाजको चुलिँदो आकाङक्षाहरूको सही व्यवस्थापन हुँदैन । देशको राजनीतिक शक्तिले नगारिकका आकाङ्क्षाहरूलाई व्यवस्थापन सक्नुपर्छ । नागरिकका आकाङ्क्षाहरूको समयमै सही व्यवस्थापन नहुँदा देशमा केही रमाइला परिदृश्यहरू पनि देखापरे । यसपटकको चुनावमा ‘सूगा’, ‘रूगा’ ‘बाछी र गाछी’, ‘दाइ र गाई’ जस्ता नाराहरू जन्मिए ।
यी नाराले एकतिर दलीय राजनीतिसँग त्यति मेल नखाने ‘क्रस–भोटिङ’ को प्रवत्तिलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यसले अलिकति त्रास, अलिकति व्राह्मणवादी अहङ्कार, अलिकति पुरातनवादी सोंच र अलिकति अन्यमनस्कमिश्रित सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो भए पनि नेपालको सामाजिक विविधता विशाल छ, जुन हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो । संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र मानिएको अमेरिकाको जादुमय प्रगतिको एउटा कारण हो, सामाजिक विविधताको कदर र व्यवस्थापन ।
उनीहरू सामाजिक विविधतालाई सम्पत्ति ठान्छन् । त्यसैले त उनीहरू ‘डाइभर्सिटी भिसा’ चिठ्ठामार्फत् बेग्लै सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका अरू देशका मानिसहरूलाई हरेक वर्ष स्वागत गरेर आफ्नो देशको नागरिक बनाउँछन् । सांस्कृतिक विविधताले समाजलाई रसिलो र भरिलो बनाउँछ भन्ने अमेरिकी विश्वास निरन्तर जारी छ । अब हाम्रै नेपालको कुरा गरौं । सामाजिक विविधता देखेर हामी निरन्तर डराइरहेका छौं । नागरिकका जातीय पहिचनको कुरा गर्दा रगतको खोलो बग्ने र देश टुक्रिने डरले हामी लुगलुग कामिरहेका छौं । बनको बाघले खानु कता छ कता, हामीलाई मनको बाघले खाइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले हामी सबै नेपाली हौं । जनजातिहरूलाई पनि देशको माया छ ।
आजसम्म देश टुक्र्याउने कुरा कसैले गरेका छैनन् । कसैले भावावेगमा देश टुक्र्याउने र रगतको खोलो बगाउने कुरा गरेको छ भने त्यो परालको रुन्को बलेको भन्दा बढी केही होइन । बरु देशलाई भित्रभित्रै खोको तुल्याउने विदेशी शक्तिका उपासकहरूबाट पो देशलाई खतरा छ ।
हामी मध्ययुगीन नेपाली होइनौं, एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सचेत नागरिक हौं । पहिचानको नाममा कसैलाई देशनिकाला गर्ने र आँखा फोर्ने काम कसैले गर्न पाउने छैनन् । तर यहाँ पहिचानको कुरा गर्नेबित्तिकै कोकोहोलो मच्चिने गरेको छ ।
मानौं, पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै रणसंग्राम मच्चिइहाल्छ । पहिचानसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । समुदायको नाम र जीवनशैली नै पहिचान हो । यसमा योभन्दा बढी कुरा छैन । लोकतान्त्रिक नेपालमा अलोकतान्त्रिक चरित्र देखिन थालेको छ । ‘नाम मेरो, गाउँ तेरो’ भनेजस्तो हो, पहिचान । दुराडाँडामा बस्ने बाहुन र बाहुनडाँडामा बस्ने गुरुङले जातीय पहिचान र साम्प्रदायिक सदभावको राम्रो उदाहरण दिएका छन् । यिनै भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक विशेषताहरूको आधारमा अब बन्ने संघीय राज्यको नामाकरण गर्दा के अनिष्ट हुन्छ ?
विगतदेखि चलिआएको नामसित जोडिएको पहिचानको सवालसँग डराउनुपर्ने के कारण छ ? यसरी नामाकरण गर्दा स्थानीय समुदायको सम्मान गरेको ठहरिन्छ । विगतमा भाषिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानलाई आत्मसात गर्दा राष्ट्रियता एकता अझ मजबुत बन्छ । विविध संस्कृतिहरूको गठजोड नै सिङ्गो नेपाली संस्कृति हो । त्यसैले नेपाललाई बलियो तुल्याउन नेपालका विविध संस्कृति र समुदायहरूलाई मायाममताले कख्याउनै पर्छ ।
यो नै पहिचानको सर्त हो । अहिले नेपालको राजनीतिक ढिकीमा जनजाति समुदायका लागि भनेर फलामे च्यूरा कुटिँदैछन्, जसलाई चपाउन जनजाति अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूलाई हदैसम्म कठिन हुनेछ भनिँदैछ । नागरिकका आकाङ्क्षाहरूलाई पक्ष र प्रतिपक्षको विचारधाराको रूपमा चित्रण गरिँदैछ । नेपाली नागरिकका पहिचानसित गाँसिएका आकाङ्क्षाहरूलाई पक्ष र प्रतिपक्षको विचारधाराको रूपमा रूपमा हेर्ने काम नै गलत हो ।
यसलाई सम्पूर्ण नेपालीको साझा आकाङ्क्षाको रूपमा आत्मसात गरिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र नागरिकका आकाङ्क्षाहरूको सही व्यवस्थापन हुनसक्छ । समाजमा समुदायहरू स्वाभाविक रूपमा आकाङ्क्षी हुन्छन् । समुदायको आकाङ्क्षालाई तेजोबध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु समस्यामाथि समस्या थप्छ । विश्वका थुप्रै दृष्टान्तहरूले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । समुदायको आकाङ्क्षालाई सही व्यवस्थापन गरेमात्र समस्याको गाँठो फुकिन्छ । समस्याको गाँठो भावावेगबाट फुकिँदैन । यसका लागि राजनीतिक र सामाजिक सुझबुझ जरुरी छ ।
यसो भएमा मात्र विविधताले भरिएको नेपाली समाजको सुन्दरतालाई बचाउन सकिन्छ र नेपाली नागरिकको उर्लँदो आकाङ्क्षाको सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई आकाङ्क्षाहरूले भरिएको सपना देखाउने तर नागरिकका सपनालाई विपनामा परिणत गर्न प्रयास इमान्दार प्रयास भूल राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो ।
यही भूल भूसको आगोमा परिणत भइरहेको छ । अब यसलाई निभाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नगरी सुखै छैन । अनि, भुसको आगो निभाउन भुस र आगोको प्रकृति नबुझी हुँदैन । सबैलाई चेतना भया ।
[ साभार: राजधानी दैनिक ( मंसिर १२, २०७०) ।
Posted by दुराका कुरा at 10:38 AM No comments:
Labels: Identity politics in Nepal
इतिहासको दुर्लभ साक्षीलाई सम्झँदा
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध । सबैलाई एकपटक सोंच्न बाध्य तुल्याउने रक्तरञ्जित इतिहास । सौभाग्य भनौं वा दुर्भाग्य, गोर्खा सैनिकहरू इतिहासका यी रक्तरञ्जित अध्यायहरूका साक्षी बन्न पुगे । प्रथम विश्वयुद्धका भुक्तभोगी गोर्खा सैनिकहरू अब यस धर्तीमा छैनन् । दोस्रो विश्वयुद्ध देख्ने–भोग्नेहरू अझै जीवित छन्, त्यो पनि औंलामै गन्न सकिने जति मात्र । उनीहरू डाँडामाथिको घामजस्ता छन् । आज हो कि भोलि, कुनै भरोसा छैन । उनीहरू एकपछि अर्को गरी अस्ताउँदैछन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धको दुर्लभ साक्षीमध्येका एक क्याप्टेन बखानसिंह दुरा केही महिनाअघि यस संसारबाट बिदा हुनुभयो । उहाँ केही वर्षदेखि पोखरामा बस्दै आउनुभएको थियो । उमेरले एक शताब्दीमा टेक्दै गर्दा २०७० साल भदौ २० गते उहाँ यस धर्तीबाट सदाका लागि अस्ताउनुभयो ।
उहाँको देहावसनबाट नेपाली समाजले इतिहासको एउटा दुर्लभ साक्षीलाई गुमायो । यससँगसँगै उहाँको लगभग ८० वर्ष लामो दाम्पत्य जीवनको अध्याय पनि अन्त्य भयो ।
उहाँको जीवनकहानी कम घतलाग्दो छैन । फौजी सिंदुर पहिरिएर पहिलो छुट्टीमा घर आउँदा उहाँले मैखु दुरालाई सिंदुर पहिर्‍याउनुभएको थियो । त्यतिबेला बेहुलाको उमेर २० वर्ष थियो भने बेहुली मैखु दुराको उमेर मात्र १२ वर्ष । अहिले मैखु दुरा ९२ वर्षकी हुनुभयो ।
अहिले क्याप्टेन बखानसिंह दुराका १४ पनाति, १८ पनातिनी, तीन खनाति र तीन खनातिनीसहित ८७ जना शाखा–सन्तान छन् । उनीरूको नसामा बखानसिंह दुराको रगत जीवित छ । उहाँले आठ दशक लामो दाम्पत्य जीवन बिताउन पाउनुभयो र खानाति–खनातिनीसम्मलाई काखमा खेलाउन पाउनुभयो । यो चानचुने कुरा होइन । उहाँको जस्तो शौभाग्यपूर्ण जीवन अबका दिनमा कमैले भोग्न पाउलान्, ‘लेट म्यारिज्’ र कम सन्तान जन्माउने चलनले गाँजेको वर्तमान घडीमा ।
पल्टनिया सँगीहरूसँग क्या. बखानसिंह दुरा
वि.सं. १९७१ साल मङ्सिर १० गते उहाँ लमजुङ जिल्लाको दुराडाँडास्थित भाँगु गाउँमा जन्मनुभएको थियो । उहाँ सन् १९३३ अप्रिल १२ तारिखमा भारतको गोरखपुरमा १८ वर्षको उमेरमा भर्ती हुनभयो । त्यसपछि हालको पाकिस्तानस्थित अटवाबाज तालिम केन्द्रमा पल्टनिया बुट बजार्न पुग्नुभएको थियो ।
सन् १९३९ । दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहारकारी आगो सल्किँदै थियो । पल्टनमा लडाइँको तयारीसम्बन्धी तालिम चल्दै थियो । यत्तिकैमा लडाइँको शंखघोष भयो । उहाँ तत्कालीन ब्रिटिश–इन्डियाको तर्फबाट विभिन्न स्थानमा मर्ने र मार्ने खेलमा खटिनुभयो । यसै मेसोमा सन् १९४५ मा उनी जापानसँगको लडाइँमा बर्मामा खटिनुभयो । त्यतिबेला जापानी सैनिकले हानेको बमको टुक्राले उहाँको बायाँ कोखामा निशाना लगायो । उहाँको आन्द्र–भुँडी बाहिर निस्कियो । उहाँको सहकर्मीले त्यसलाई पुनः पेटभित्र हुलिदियो । उहाँ पाँच दिनसम्म बेहोश हुनुभयो ।
युद्ध जारी रहेको अवस्थामा उहाँलाई तत्कालै अस्पताल पुरयाउने व्यवस्था हुन सकेन । केही दिन क्याम्पमै घाइते शरीर लिएर बसेपछि उनलाई ढाका (बंगलादेश) स्थित अस्पतालमा भर्ना गरियो । उपचारपछि निको भएर लडाइँमा जाने बेलामा एक्सरे गर्दा पेटमा बमको छर्रा बाँकी रहेको भेटियो । डाक्टरको सल्लाहअनुसार अपरेशन गरेपछि उहाँले तीन महिना अस्पतालमै बिताउनुभयो । त्यसपछि उहाँ तन्दुरुस्त हुनुभयो । लडाइँमा पुनः सामेल हुने तयारी गर्दै गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको घोषण भयो । उहाँ युद्धको विभीषिकाबाट बाँच्नुभयो । उहाँको मुखबाट युद्ध र फौजी जीवनसँग गाँसिएका यस्ता संस्मरणहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुन्न पाइन्थ्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका उहाँको तलब १६ भारतीय रुपैयाँ थियो । उहाँको त्यतिबेलाको खर्चको फाँटवारी पनि कम रोचक छैन । उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, ‘१६ रुपैयाँमध्ये १२ रुपियाँ परिवारलाई दिइन्थ्यो, ३ रुपियाँ छुट्टीको लागि काटिन्थ्यो भने १ रुपैयाँमात्र हामीले पाउँथ्यौं ।’
उहाँको पल्टनिया गफ निकै चाखलाग्दो हुन्थ्यो । गाउँघरमा मारुनी र सोरठी नाँचेर पल्टनमा पुगेका गोर्खाली ठिटाहरू विदेशी शैलीको नाँचमा तालमा ताल मिलाएर नाँच्न नजान्दा बेढङ्गे देखिन पुगेको, पानी जहाजमा हप्तौं यात्रा गर्दा फौजी जवानहरू ‘मोसन सिकनेस’ ले इन्तु न चिन्तु भएको, छुट्टीमा घर फर्कदा ‘ट्रन्जिट क्याम्प’ मा ‘लैनछोकडी’ को नगदमुखीमा मायामा भुलेर लाहुरेहरू रित्तो खल्ती लिएर घर फर्किएको, गाउँका सोल्टिनीहरूले दिएको सम्झना–कोसेलीको पोको बोकेर पल्टने ठिटाहरू आँसु पुछ्दै हाँजिर हुन गएको आदि । अब हत्तपत्त सुन्न नपाइने तत्कालीन समयको फौजी संस्करणका यी कहानीहरू आफैंमा दुर्लभ विषय बनेका छन् ।
जवान छँदा क्या. बखानसिंह दुरा
सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी पञ्जाबाट भारत मुक्त भएपछि भारतीय सैनिक बन्ने कि बेलायती सैनिक बन्ने भन्नेबारे उहाँको साथीसंगीहरूबीच बहस चल्यो । यस क्रममा उहाँले बेलायतको अधिनमा बस्ने निधो गर्नुभयो । बेलायती सैनिक बनेपछि बर्माबाट उहाँ मलाया (मलेशिया) को 'सुनगाइ पटानी' भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो । सैनिक सेवामा उल्लेखनीय योगदान दिएवापत थुपै पदक र मानपद्वी थाप्ने उहाँलाई श्रद्धासाथ हेर्ने मानिसहरूको कुनै कमी छैन । बेलायती सेनाका ९२ वर्षीय कर्णेल जेपी क्रसको विचारमा क्याप्टेन बखानसिंह दुरा जङ्गी सेवा र समाजसेवाको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ ।
२४ वर्षको पल्टनिया जीवनको थुप्रै उतारचढाव पार गरेपछि उहाँ सन् १९५७ मा सैनिक सेवाबाट सेवा निवृत्त हुनुभयो । शुरुमा उहाँको पेन्सन ६० रुपैयाँमात्र थियो । उहाँले सन् १९६० देखि १९६८ सम्म पक्लिहवामा ‘असिस्टेन्ट रिक्रुटिङ अफिसर’ (एआरओ) को रूपमा काम गर्नुभयो । यस क्रममा उहाँले रोटो र भोटोको खोजीमा भौंतारिएका गाउँबस्तीका थुप्रै बेरोजगार युवाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गराउनुभयो । यद्यपि राजनीतिक वृत्तमा गोरखा भर्ती केन्द्रको पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको बहस आजपर्यन्त कायमै छ ।
एआरओको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि उहाँ पूर्ण रूपमा समाजसेवामा होम्मिनुभयो । वि.सं. २०२४ तिर उहाँ तत्कालीन रत्नदेवी गाउँ पञ्चायतको कार्यवहाक प्रधानपञ्च समाजको सेवामा लाग्नुभयो । उहाँ स्थानीय विद्यालयहरू— सर्वोदय मावि (च्यानपाटा), देवी सदन प्रावि (तुर्लुङकोट) र सरस्वती सदन मावि (ठूलोस्वाँरा) — को सञ्चालक समितिमा रहेर शिक्षा सेवामा सरिक हुनुभयो ।
वि.सं. २०३९ सालमा रत्नदेवी गाविस टुक्रिएर पुरानकोट गाउँ पञ्चायत र सिंदुरे गाउँ पञ्चायत बनेपछि उहाँ सिंदुरे गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ गाउँठाउँको विकासमा जुट्नुभयो । राजनीतिक पद लिएर पनि राजनीति नगरिकनै समाजसेवामा जुट्नुभयो । उहाँ पाटीपौवादेखि बाटोघाटोसम्मको स्थानीय आवश्यकताअनुरूपका विकास निर्माण कार्यमा जुट्नुभयो । त्यस क्षेत्रमा उहाँ निस्वार्थी र कर्मठ समाजसेवीको रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
क्या. बखानसिंह दुरा श्रीमती मैखु दुराका साथ (तस्बिर : किसान दुरा)
पहिचानको निम्ति छटपटाइरहेका अल्पसंख्यक दुरा समुदायको इतिहास खोज्ने, शाहवंशीय राजसंस्थाको स्थापनासँग गाँसिएको लमजुङको दुराडाँडास्थित ऐतिहासिक स्थल सिंदुरे ढुङ्गाको उत्थान र विकास, सिंदुरे ढुङ्गामा फूटबल मैदान निर्माण, राणाशासनको अवशेषको रूपमा रहेको बेठबेगारी प्रथा हटाउनेलगायतका लोककल्याणकारी कार्यमा उहाँको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो ।
उहाँको निधनबारे आमसञ्चार माध्यमहरू बेखबरजस्तै भए । भनिन्छ, बेलायतमा सडकमा ‘वार भेटरान’ हिँडेको देखेमा हरेक व्यक्तिले श्रद्धापूर्वक ‘स्यालुट मार्ने ' गरिन्छ । तर यहाँ इतिहास रचयिताको मृत्युको खबरसम्म पनि आमसञ्चार माध्यममा नआएको घटनालाई अनौठो मानिँदैन । इतिहास रचयिताकै इतिहास नलेखिने विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीकहाँ छ । आफैं इतिहास बनिसक्नुभएका इतिहासका दुर्लभ साक्षी तथा लोकहितैषी क्याप्टेन बखानसिंह दुराप्रति असीम श्रद्धा र लाख लाख 'स्यालुट' ।
[साभार: गोरखपत्र 'शनिबार' (कात्तिक २३,२०७०)। सामान्य परिमार्जनसहित]
[अद्यावधिक : २०७२।०६।१९ ]
Labels: Memoir on World War-II Veteran